Kunyemudzwa Beche naMaiguru mukoma wemukadzi wangu – Makuhwa.co.zw
Kunyemudzwa Beche naMaiguru mukoma wemukadzi wangu. Hanzi ndochiramu chacho.
Hameno kuti ndicho chiramu here or what but maiguru wangu is always teasing me vachiti varikutamba neni havo. My wife works in town muno muHarare and ini I work as a mechanic ndoshandira pamba. Maiguru vanogara nesu kubva pakashaya murume wavo that’s like 4 years ago.
One day i finished early kaVitz kandaigadzira and went and took a bath. It was around 12:30 and vana were at school. Wifey was kubasa and pamba was Mai Nyasha and she offered to make lunch for me. Ndapedza kugeza ndakagara and ate lunch hangu maiguru vakabva vaenda nekubedroom kwavo wearing this very tight bum shorts and asked… “Bamnini what do u think of this?” Ndakaseka and said she looked very good. Vakadzokera kubedroom and came back havo vakapfeka ma skinny jeans aibata kuratidza macurves avo vakanditi nditarise and comment again. I said she looked amazing and she ran back to her room shouting “LAST ONE and don’t freak out”
To be continued… Watch out for Part 2 of Kunyemudzwa Beche naMaiguru mukoma wemukadzi wangu – Hanzi ndochiramu chacho
Related Topics:Kunyemudzwa Beche naMaiguru mukoma wemukadzi wangu